20 Taonan’ny Fananganana Indray Taorian’ny Vanim-Potoana Sovietika : Tranomboky any Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2014 22:17 GMT
Rehefa nisamatsamaka tamin'ny fomba ofisialy ny Firaisana Sovietika tamin'ny 1991, tafiditra ho vokatr'izany toe-javatra izany ny fahaleovantena ary eo ihany koa ny fitotonganana “mahatsiravina” eo amin'ny fari-piainana tany amin'ny firenena taorian'ny vanim-potoana sovietika, izay nanjavonan'ny fitatazan'ny kidoro malemilemy amin'ny toe-karena.
Ny Tranomboky Pushkin dia miorina any Kazakhstan. Rehefa rava i URSS dia maro ny tranomboky nikatona, ary 30% sisa no niverina niasa amin'izao fotoana izao, hoy ilay mpitana tranomboky Zarina Karimova.
Vao haingana izay ny tranomboky no nahazo loka vatsy avy amin'ny fikambanana isan-karazany, indrindra fa eo amin'ny fahaiza-mamaky teny amin'ny solosaina. Tamin'izany fanampiana izany ry zareo no nahavita nanatsara ny fidirana amin'ny aterineto ao amin'ny fiaraha-monina misy an-dry zareo, fanazarana fototra amiin'ny solosaina, sy ny e-fianarana mbamin'ny fianarana mifototra amin'ny Skype. Vaao haingana izay ny UNDP (PNUD) no nanampy azy ireo hividy fitaovana sasantsasany hahatonga ny tanàna ambanivohitra ho tafiditra an-tserasera, mifantoka amin'ny fanatsarana ny fandraharahana. Nahatonga fametrahana ivon-toerana an-tserasera 32 tao amin'ny faritra izany ary nanafaingana kokoa ny fihisatry ny aterineto.
Mihamazava ny zava-dehibe rehefa mahafantatra ny jeografia ara-paritry ny mponina – sy ny hakitroky ny mponina ambany dia ambany ao aminy. Amin'ny fananany mponina 17 tapitrisa (tombana 2013), Kazakhstan no laharana faha-62 be mponina indrindra manerantany, na dia miaty latsaky ny olona 6 isaky ny kilometatra toradroa aza ny hakitroky ny mponina. Midika izany fa sarotra dia sarotra indrindra ny hahazoana serasera ary ambany ny famantarana aterineto, ary vokatr'izany, ambany dia ambany ny fahaizana solosaina.
Noho ny fahafantarana izany ao an-tsaina, dia nanomana fandaharana manokana ho an'ny mpianatra ihany koa ny tranomboky, ka anatin'izany ny fanazarana ny TIC, atrikasa momba ny fakantsaripika nomerika sy ny fanaovan-gazety, fianarana teny anglisy, ary ny maro hafa – ao anatin'ny Programam-panavaozana ny Tranombokim-Panjakana tontosain'ny EiFL, ONG miasa miaraka amin'ny tranomboky any amin'ny firenena andalam-pandrosoana.
Ny Tranomboky Pushkin dia miasa miaraka amin'ny Libraries Without Borders [tranomboky tsy voasakan-tsisintany] hanangana programa ho an'ny sembana. Manantena izy ireo hampiditra ny sembana ao amin'ny fikambanana (fiaraha-monina) ao an-toerana.